I-China China Imikhiqizo Ephansi Yezintengo I-Factory Factory I-Polyester Pillow Abakhiqizi-Rayson | Rayson
Lo mkhiqizo uyi-hypoallergenic. Izindwangu zayo azivumeli umswakama okuyi-ecosystem ephelele yamabhaktheriya namagciwane okuzala ukuze akhe.
1.Umatilasi wakho kufanele uhlale isikhathi esingakanani?
Njalo umatilasi wehlukile. Uma uphonsa ebusuku noma uvuka ubuhlungu sekuyisikhathi sokuthola umatilasi omusha kungakhathalekile ukuthi uneminyaka emingaki. Sincoma ukuthi uhlole umaki womthetho bese ushintsha okungenani njalo eminyakeni eyisishiyagalombili.
Iziphi izindlela zokukhokha ozamukelayo?
I-LC ekubukeni / nge-TT, i-30% yeDeposi ne-70% esele iphikisana namakhophi wemibhalo yokuthumela i-witinin izinsuku eziyi-7 zokusebenza.
Ngingazithola kanjani amasampula athile
Ngemuva kokuthi uqinisekise ukunikezwa kwethu futhi usithumelele izindleko zesampula, sizoqeda isampula kungakapheli izinsuku eziyi-15 ~ 20. Ungacela inkampani ebonakalayo ukuthi ithathe isampula enkampanini yethu noma ungasithumela i-DHL, FedEx noma i-UPS yokuqoqa inombolo ye-akhawunti, singakuthumela isampula lelo nge-akhawunti yakho.
1.Amakhasimende afuna ukwazi kabanzi ngomkhiqizo wethu omusha noma inkampani yethu, vele uxhumane nathi.
2.Silandela ngokuqinile izinqubo ezijwayelekile zokulawula ikhwalithi ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu ihlangabezana noma yeqa okulindelwe ngamakhasimende ethu. Ngaphezu kwalokho, sinikezela ngezinsizakalo zokuthengisa ngemuva kwamakhasimende emhlabeni wonke.
3.Since esungulwe, uRayson uhlose ukuhlinzeka ngezixazululo ezivelele nezihehayo kumakhasimende ethu. Sisungule owethu uR & D isikhungo sokwakhiwa komkhiqizo nentuthuko yomkhiqizo.
Sithembisa ukuthi imikhiqizo ithunyelwa kumakhasimende aphephile futhi azwakala kahle. Uma unanoma yimiphi imibuzo noma ufuna ukwazi kabanzi nge yethu, sishayele ngqo.
I-Rayson Global Co, Ltd ibhizinisi elihlanganyelwe le-Sino-US, elisungulwe ngo-2007 eliseShishan Town, eFoshan High-Tech Zone, futhi lihleli eduze kwamabhizinisi adumile njengeVolkswagen, iHonda Auto neChimei Innolux. cishe imizuzu engama-40 ngemoto usuka eGuangzhou Baiyun International Airport naseCanton Fair Exhibition Hall. Indlunkulu yethu " IJINGXIN " yaqala ukwenza ucingo lwasentwasahlobo lokukhiqizwa kukamatilasi phakathi no-1989, kuze kube manje, uRayson akayona ifektri kamatilasi kuphela (ama-15000pcs / inyanga), kodwa futhi ungomunye wamatilasi omkhulu ongaphakathi (60,000pcs / ngenyanga) kanye ne-PP non Indwangu ephothiwe (ama-1800tons / ngenyanga) abakhiqizi eChina nabasebenzi abangaphezu kuka-700. Ngaphezu kwemikhiqizo yethu engama-90% ithunyelwa eYurophu, eMelika, e-Australia nakwezinye izingxenye zomhlaba. Siphakela izingxenye zikamatilasi eSerta, Sealy, Kingkoil, Slumberland nakwezinye izinhlobo zikamatilasi ezidumile zomhlaba wonke. URayson angakhiqiza umatilasi wasentwasahlobo, umantilasi wasentwasahlobo, umantilasi wasentwasahlobo oqhubekayo, umatilasi we-foam foam, umatilasi wegwebu nomatilasi we-latex njll.